कुखुराभन्दा आलु महंगो, प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ « Artha Path
२२ चैत्र २०७६, शनिबार
कुखुराभन्दा आलु महंगो, प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७६, शनिबार
कञ्चनपुर । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको मारमा कञ्चनपुरका कुखुरा पालक कृषक परेका छन् । लकडाउनका कारण बजार नपाउँदा तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा बेच्न नपाउँदा कृषक मारमा परेका छन् । जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी किसान कुखुरा पालन व्यावसायमा आवद्ध छन् ।
कुखुरा तथा अण्डा उत्पादन संघका अध्यक्ष विक्रम नाथका अनुसार अहिले ३ लाख ८० हजार कुखुरा तयारी अवस्थामा छन् । उनले भने, “सरकारले ढुवानी रोकेको छैन भनिरहेको छ । तर हामीले कुखुरालाई खुवाउने दाना लगायतका सामाग्री पाउन सकिरहेका छैनौं । ३०/३५ दिन कटेपछि कुखुरा बजारमा जान तयार हुन्छ । दानाको अभावमा पोल्ट्री फार्म भित्रै मर्ने अवस्था छ ।”
उनले यसअघि १० हजार तयारी कुखुरा नष्ट गरिएको समेत बताए । सरकारले किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा नगरे सयौं कृषक मारमा पर्ने उनी बताउँछन् । आफूहरुलाई घुम्ती सेवामार्फत निश्चित समय तोकेर भए पनि उत्पादित कुखुरा बेच्ने अवस्था सिर्जना भए थोरै भए पनि राहत हुने उनले बताए ।
अध्यक्ष नाथले भने, “आलुको मुल्य ५० देखि ७० रुपैयाँ प्रतिकेजी छ । हामीले भने पोल्टी फार्ममा आउनेलाई ५०/६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बोइलर कुखुरा बेचिरहेका छौं । तर बजार नपाउने हो भने सबै कुखुरा नष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।”
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडा कुखुरा पालक किसानका गुनासो आइरहेको स्वीकार गरे । तर उनीहरुका बारेमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीति बन्न नसकेको उनले बाह्रखरीसँग केही दिनअघि बताएका थिए । बाह्रखरी
मन्त्रीको निशानामा प्राधिकरण
मानमति पन्त काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मन्त्रीको निशानामा परेको छ । उपत्यकाका तीन
बढ्दैछ खोपको माग, पाँच वर्षमा आयात १८ गुणाले बढ्यो
काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम बढेपछि मुलुकभर खोपको माग बढ्न थालेको छ । केहि बर्ष अघिसम्म
इन्डोनोसियाको ७६ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा झण्डोत्तलन
काठमाडौं । गणतन्त्र इन्डोनेसियाको ७६ औँ स्वत्रन्त्रता दिवको अवसरमा नेपालका लागि इन्डोनेसियाको अवैतनिक वाणिज्य दूतको
धमाधम आउन थाल्यो कोरोनाको खोप, कहाँ राख्ने र कसरी बाँड्ने चिन्ता !
काठमाडौं । दक्षिण एसियामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने दोस्रो मुलुक भएर पनि
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
सोलारको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट
मुक्तिनाथ बैंकले ल्यायो सर्वाधिक ब्याज दिने आकर्षक बचत खाता
नेको इन्सुरेन्सद्वारा ६ महिनामा ७० प्रतिशत दावी भुक्तानी
किन हुन्छ हृदयघात ? हृदयघात हुन नदिन के गर्ने ?…
तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह